सधैं गतिशील- कोसेली - कान्तिपुर समाचार
मंसिर १४, २०७६ ध्रुव तुलाधर
'ओल्ड इज गोल्ड,' दक्षिण एसियाली खेलकुदमा वैकुण्ठ मानन्धरले स्वर्ण पदक जितेपछि भोलिपल्टको भारतीय दैनिकहरूले लेखे । ‘उमेर ३५, दौड्ने २०’ भन्दै समाचारमा उनको खुबै तारिफ भयो । तन्नेरी धावकले जसरी दौडिएको भनेर चर्चा गरिएको थियो । कोलकाता रंगशालामा ३३ वर्षअघि पाएको वैकुण्ठको त्यो सफलताको चर्चा अहिले पनि उत्तिकै छ ।
जब दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) आउँछ, तब उनको त्यो स्वर्णको कथा कोरिन्छ । तत्कालीन दक्षिण एसियाली महासंघीय (साफ) खेलकुद, अहिले परिवर्तित नाम सागको तेस्रो संस्करण भारतको कोलकातामा भएको थियो । सन् १९८७ मा वैकुण्ठले कोलकातामा रचेको म्याराथनको कीर्तिमान तेजस्वी छ । पहिलो र दोस्रो साफमा स्वर्ण जितिसकेकाले स्वर्णको ह्याट्रिक गर्ने पालो थियो । तयारी राम्रो थियो । त्यसले गर्दा टाइमिङ सुधार्नुपर्ने दबाब उत्तिकै थियो उनमा ।
कोलकाता जानुअघि सबैको हौसला र साथ पाएका थिए उनले । तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले समेत उनलाई हौसला भरिदिएका थिए । प्रशिक्षणमा विशेष प्राथमिकता गराइदिएको थियो । जर्मन र रसियन प्रशिक्षकको निगरानीमा थिए । वैकुण्ठ सम्झन्छन्, ‘त्यसले मलाई धेरै ऊर्जा दियो । मैले पनि केही गर्नुपर्छ भन्ने अठोट रह्यो । त्यो कोलकाताको ट्र्याकमा देखाएँ । तेस्रो स्वर्ण जितें । कीर्तिमान पनि बनेछ । त्यो मेरा लागि एउटा बयान गर्न नसकिने क्षण थियो । कोलकातामै मेरो चर्चा चुलिएको थियो ।’
उनले २ घण्टा १५ मिनेट ०३ सेकेन्डको म्याराथन टाइमिङ निकालेका थिए । दोस्रो साफ (१९८५) मा कायम गरेको भन्दा ७ मिनेट सुधारेका थिए । जबकि २ घण्टा २२ मिनेट ०७ सेकेन्डमा ढाकामा उनले स्वर्ण जितेका थिए । त्यतिबेला नेपालको स्वर्ण जित्नेमा वैकुण्ठ मात्र रहे । लामो दूरीमा नेपाली धावकलाई पहिलो र दोस्रो संस्करणमा कमैले चुनौती दिन्थे । सन् १९८४ को काठमाडौं साफमा २ घण्टा २७ मिनेट ११ सेकेन्डबाट स्वर्ण जित्दा वैकुण्ठलाई चुनौती दिने आफ्नै देशका अर्जुन पण्डित थिए । अर्जुनले २ घण्टा ४२ मिनेट लगाएर रजत जितेका थिए ।
तेस्रोमा भने उनलाई श्रीलंकन धावक समरासिंघेलाई कडा टक्कर दिएका हुन् । वैकुण्ठले सम्झिए, ‘उनी म सँगसँगै दौडिरहेका थिए । उसलाई त कुनै पनि हालतमा जित्छु भन्ने मेरो ध्यान थियो । अन्तिमतिर गति बढाएँ । उनलाई पछाडि पारें ।’ चौथो संस्करण (इस्लामाबाद, १९८९) मा उनै समराले वैकुण्ठलाई पछाडि पार्दै स्वर्ण जिते पनि टाइमिङ (२ः१९ः४२) मा उछिन्न सकेनन् । त्यसमा वैकुण्ठले कांस्य पदक जिते । उनी चाहन्थे, आफ्नै चेला टीकाबहादुर बोगटीले पदक जितुन् भन्ने तर त्यस्तो भएन । चौथोदेखि आठौंसम्म वैकुण्ठको म्याराथन पथलाई टीका, विसनसिंह राउत, गणेशबहादुर राईले पछ्याएका थिए । कोलम्बो (१९९१) र ढाका (१९९३) मा कांस्यमा चित्त बुझाएका टीकाले मद्रासमा स्वर्ण जिते ।
२० वर्षपछि नेपाली भूमिमा साग आयोजना हुँदै छ । साग पूर्वसन्ध्याले आम खेलकर्मीलाई चटारो छ । त्यही मेसोमा भेटिँदा वैकुण्ठ भने फुर्सदिला देखिए । देशकै लिजेन्ड धावक भए पनि उनी भूमिकाविहीन छन् । ६८ वर्षे वैकुण्ठको दशरथ रंगशालामा धाउनेक्रम रोकिँदैन । बिहान सबैरे आइपुग्छन् । पुनर्निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको रंगशाला फन्का हाल्छन् । साथीभाइ भेट्छन्, चेलाहरूसँग गफिन्छन् अनि कलंकी सुनार गाउँस्थित घर फर्कन्छन् । डेढ दशकअघि मुटुको भल्भ फेरेका उनको कर्म मैदानमा आउन खुट्टा रोकिँदैन ।
झन्डै चारपल्ट वैकुण्ठ रंगशाला पुनर्निर्माण भएको आफैंले देखेका छन् । आठौं साफमा पनि पुनर्निर्माण भएको थियो । त्यसअघि २०३७ साल र २०२८ सालमा पनि पुनर्निर्माण गरिएको थियो । २०२८ सालमा त उनीहरू दौडिएर रंगशाला र कभर्डहलको उद्घाटन गरेका थिए । त्यसैले रंगशालाप्रति उनको मोह अत्यधिक छ ।
१३ औं सागमा तपाईको कुनै भूमिका छैन ? एक छिन उनी अनुत्तरित भए । भने, ‘मलाई कहाँ भूमिका दिन्छन् । मेरो डाह गर्ने धेरै छन् । म छुच्चो छु । मनमा लागेको बोल्छु । त्यो खेलकुदका शासकलाई मन पर्दैन, पच्दैन । म आशा पनि गर्दिनँ । नयाँ पिँढीले पाउनुपर्छ । उचित मान्छेलाई उचित ठाउँ दिइनुपर्छ तब मात्र खेलकुद विकास हुन्छ ।’
साग उद्घाटनको दिन ओलम्पिक टर्च बाल्न पाउनेमा भने विश्वस्त छन् । ‘ओलम्पियन अनि यही सहरको वासिन्दा भएको नाताले ओलम्पिक टर्च बाल्न पाउनु मेरो अधिकारमा पर्छ,’ चारपल्ट ओलम्पिक खेलेका वैकुण्ठले सुनाए ।
दक्षिण एसियाली खेलकुद नजिकिएसँगै सधैं उनको मनमा भुटभुटी चल्छ । आफ्नो नामको कीर्तिमान अरू कुनै देशका खेलाडीको नाममा नजाओस् । कीर्तिमान नेपालकै धावकको नाममा लेखिएको देख्न चाहन्छन् उनी । सम्भव छ त ? यस किसिमको छोटो तयारीले कीर्तिमान तोड्न गाह्रो हुने उनी ठोकुवा गर्छन् । ‘३–४ महिनाको तयारीले कहाँ पुग्छ ? लामो क्याम्पमा राख्नुपर्छ । त्यो पनि खेलाडीको ट्रेनिङ एज हुन्छ । त्यतिबेला राम्रो प्रशिक्षण पाउनुपर्छ । तब नतिजा त्यहीअनुसार दिन सक्छ । नत्र सम्भव हुँदैन,’ लामो दूरीका धावक तयार पार्न सानै उमेरदेखि हरेक पक्षमा ध्यान दिनसके नेपाली खेलाडीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै राम्रो सफलता पाउने उनको बुझाइ छ ।
देशको भौगोलिक बनावटका कारण नेपाली दौडमा सफल हुने वैकुण्ठको अनुभव छ । ‘दौडका लागि हाम्रो ‘जिन’ नै राम्रो छ । अफ्रिकी देशले जस्तै योजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ । तब मात्र हामी धावकहरूले भरिएको देश हुन सक्छौं,’ उनी भन्छन्, ‘नीलेन्द्रराज श्रेष्ठले ल्याएको सहर म्याराथनको अवधारणामा जान सके त्यसले खेलाडी र देशको आर्थिक र सांस्कृतिक पक्षको पनि विकास हुन्छ ।’
सागमा लगातार तीन स्वर्ण जित्नुको रहस्य के थियो त ? खेलाडीमा हुनुपर्ने गुण थियो, ‘अनुशासन, मिहिनेत र देशप्रति समर्पण ।’ यिनै कुराले उनको खेलाडी जीवनलाई बाँधिरह्यो । आफ्नो खेलप्रति कुनै पनि समय विचलित भएनन् । अनि अर्को उनलाई तत्कालीन शासकहरूको बलियो साथ रह्यो । राजा वीरेन्द्रले समेत उनको ट्रेनिङबारे चासो राख्थे अनि हौसला भर्थे रे । त्यसले उनलाई राम्रो गर्न प्रेरित गरिरह्यो । भन्छन्, ‘जहिल्यै मैले केही गरेर देखाउनुपर्छ भन्ने लागिरहन्थ्यो ।’
दोस्रो साफमा स्वर्ण जितेपछि प्रबल गोर्खा दक्षिणबाहु पाए भने तेस्रो जितेपछि विख्यात त्रिशक्तिपट्ट थापे । उनले राजदरबारमा पदक थाप्न जाँदाको एउटा घटना सुनाए, ‘राजा (वीरेन्द्र) ले विशिष्ट श्रेणीमा पर्ने पदक दिन चाहेका रहेछन् । परिषद्बाट सिफारिस अर्कैमा गएछ । अनि मलाई राजाले छुट्टै बोलाएर भने— तिमी देशकै ठूलो सम्पत्ति हौं । देशको नाम फैलायौं ।
भन तिमीलाई के आवश्यक छ, के गर्नुपर्छ ? खेलाडीका लागि धेरै सुविधा छैन ।’ मैले भनें, ‘सरकार, ठीक छ । मलाई मात्र गरेर हुँदैन । अरू धेरै खेलाडी छन् । मेरोभन्दा कमजोर स्थिति भएकालाई हेर्नुपर्छ ।’ राजाले ‘हुन्छ’ भने । मलाई १० हजार रुपैयाँ दिए । त्यतिबेला पदक मात्र दिने चलन थियो । मलाई पैसा लिनु कि नलिनुजस्तो भयो । तर लिएँ । योगदानको कदर गरिएको हो भन्ने लाग्यो । त्यो जमानामा १० हजार ठूलो रकम थियो ।’
twitter:@tuladhardhurba प्रकाशित : मंसिर १४, २०७६ १०:५३
तेक्वान्दोकी मनिता शाही र उसुकी निमा घर्तीमगर दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) मा स्वर्ण जितिसकेका खेलाडी हुन् । आइतबार सुरु हुने १३ औं सागमा उनीहरू त्यो सफलता दोहोर्‍याउने अभियानमा छन् । जनमुक्ति सेनाको सिन्धुली क्याम्पमा तीन वर्ष बिताएकी अनुपमा मगर पनि कराँतेमा स्वर्णकै कोसिसमा छिन् ।
निमा घर्तीमगर १९ वर्षकी छन् । उनीभन्दा नौ वर्ष जेठी हुन्, अनुपमा मगर । र, अनुपमाभन्दा नौ वर्ष बढी उमेरकी हुन् मनिता शाही ।
यी तीनै जना आ–आफ्नै विशेषता र बेग्लाबेग्लै स्वभावका छन् । अनुपमा टिकटकमा खुबै सक्रिय हुने छिन् । गीत गाउँछिन् र मोडलिङ गर्छिन् पनि । मनिता २० महिनाकी छोरीलाई हुर्काइरहेकी छन् । निमा पढाइ र खेलमै केन्द्रित छिन्, बेलाबेला फेसबुकमा देखिन्छिन् ।
तीन जनाको एउटै विशेषताचाहिँ– यी सबै खेलाडी १३ औं सागमा स्वर्णका दाबेदार हुन् । निमा उसु खेल्छिन् । मनिता तेक्वान्दो । अनुपमा कराँते । अहिले सबथोक छाडेर उनीहरू १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) को तयारीमा जुटेका छन् । औपचारिक रूपमा आइतबार सुरु हुने सागमा घरेलु मैदानमा सहभागी हुने मात्रै उनीहरूको लक्ष्य होइन । मार्सल आर्ट्सका यी तीनै खेलाडी देशलाई स्वर्णपदक दिलाउन चाहन्छन् ।
दक्षिण एसियाली खेलकुदको महाकुम्भमा तेस्रोपल्ट सहभागी हुने अवसर पाएकी मनिता काठमाडौंकी रैथाने हुन् । उनले १० औं साग (कोलम्बो २००६) मा स्वर्ण र ११ औं साग (ढाका २०१०) मा रजत जितेकी थिइन् । १५ औं एसियाली खेलकुद (दोहा २००६) मा पनि कांस्य हात पारेकी उनी यो सागमा प्रतिस्पर्धा गर्न भने अमेरिकादेखि आइपुगेकी हुन् । असन–डल्लुकी ३७ वर्षीया उनको बिहेपछि घर फेरियो र त्यो पनि राजधानीकै कीर्तिपुर । अहिले छोरी मेल्बिना कीर्तिपुरमै बुबासँग हुर्किरहेकी छन् ।
रोल्पाली छोरी हुन्, निमा । उनी ६ वर्षको छँदै अभिभावकसँगै राजधानी छिरेकी हुन् । गुवाहाटी र सिलोङमा तीन वर्षअघि भएको १२ औं सागमा नेपालले तीन स्वर्णपदक जितेको थियो । त्यसमा पहिलो स्वर्ण निमाले चुमेकी थिइन् । त्यस बेला जम्मा १६ वर्षकी थिइन् । स्वर्ण जितेर फर्केको अर्को महिना एसएलसी दिइन् । अहिले स्नातक तहमा पुगेकी छन् । त्यस बेला कुराकानीमा उनी बाल्यकालमै रहेको प्रस्टै झल्किन्थ्यो । परिपक्व भइरहेकी उनी दोस्रोपल्ट सागमा स्वर्ण जित्ने उसुकी पहिलो खेलाडी हुने अभियानमा छिन् ।
उदयपुरकी हुन्, अनुपमा । उनी स्कुल पढ्ने १४ वर्षको उमेरमै नाचगानमा आकर्षित भएर माओवादीको पूर्णकालीन कार्यकर्ता भएकी थिइन् । त्यो २०६२ साल हो । कुन महिना भन्ने उनलाई पनि याद छैन । पढाइमा लाग्ने त्यो उमेरमै उनले माओवादी जनयुद्धको बेला गोली, ग्रिनेड बोकेर तोकिएको ठाउँमा पुर्‍याउने काम गरिन् । अर्को वर्ष (२०७३ साल जेठ) मा लोकतन्त्र आयो । गृहयुद्ध रोकियो । उनी जनमुक्ति सेना (पीएलए) को सिन्धुलीस्थित डिभिजन कार्यालय पुगिन् । त्यहाँको तीनवर्षे बसाइमै कराँते सिक्न थालेकी उनी पहिलोपल्ट सागमा प्रतिस्पर्धा गर्दै नेपाललाई पदक दिलाउने योजनामा छिन् ।
आमा बितेपछि घर लेखानी पुगेर १५ दिनको काम २ दिनमा सकाएर अनुपमा नम्बर डिभिजन कार्यालय सिन्धुली फर्केकी थिइन् । अनि उनलाई बस्नै मन लागेर र निस्किइन् । पुगिन् बालाजु डोजो, जहा ध्रुवविक्रम मल्लसँग कराँते सिकाइलाई निरन्तरता दिन थालिन् । उनलाई सेना समायोजनमा माओवादी पूर्वलडाकुको रूपमा नेपाली सेनामा जागिर खाने अवसर पनि थियो । तर, उनले स्वैच्छिक अवकाश रोजिन् । त्यस बेलासम्म पनि उनलाई खेलाडी बन्छु भन्ने लागेको थिएन ।
अनुपमाले खासमा शरीरको तौल घटाउन कराँते खेल्न थालेकी थिइन् । तौल घटाइन् पनि । ६० केजीबाट ४९ केजीको भइन् । प्रतियोगितामै सहभागी हुन थालिन् । जनमुक्ति सेनाको आन्तरिक खेलकुदमा पहिलो हुनेले २०६५ सालमा भएको पाँचौं राष्ट्रिय खेलकुदमा प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसर पाएको थियो । जनमुक्ति सेनाका खेलाडीको त्यो सहभागिताले देशमा ठूलै राजनीतिक हलचल ल्याएको थियो । उनी त्यो खेलाडीमा परिनन् ।
भोजपुरकी मीरा राई पनि सिन्धुली क्याम्पमै थिइन् । साहसिक दौड (ट्रेल रनिङ) मा सफलता हात पार्दै मीरा विश्वमै चर्चित् भइन् । मीरा र अनुपमा सिन्धुलीको भेटयता मिल्ने साथी बने । एकअर्कालाई ‘दोस्त’ भनेर बेलाउँछन् । यी २८ वर्षीया अनुपमाले १७ औं एसियाली खेलकुद (इन्चोन २०१४) मा पनि प्रतिस्पर्धा गरेकी थिइन् । त्यस बेला करातेको विवाद उत्कर्षमा थियो र उनी डोजोमा गरेको तयारीबाटै सीधै कोरिया पुगेकी थिइन् । उनीजस्तै पुगेकी विमला तामाङ त्यो एसियाडमा पदक (कांस्य) जित्ने एक्लो नेपाली भएकी थिइन् ।
यसपालि अनुपमा अरू खेलाडीसँगै क्लोज क्याम्पमा बसेर तयारी गरिरहेकी छन् । ‘क्लोज क्याम्पमा होटलमै बस्नुपर्ने रहेछ । सुरुमा घर जान पनि पाइँदैन भन्दा त कस्तो नरमाइलो लागेको थियो,’ २८ वर्षीया उनले भनिन् । उनी अहिले क्लोज क्याम्पमा सहज मानिरहेकी छन् । उनले गत महिना ढाकामा भएको दक्षिण एसियाली कराँते च्याम्पियनसिपमा रजत जितेकी थिइन् । यसले पनि १३ औं सागमा उनलाई उत्साहित बनाएको छ । ६८ केजीमाथि प्रतिस्पर्धा गर्न लागेकी उनले भनिन्, ‘तयारी राम्रै भइरहेको छ । सफलता प्राप्त गर्नका लागि उच्च स्तरको प्रदर्शन गर्न सक्दो कोसिस गर्नेछु ।’
नाच्ने गाउने मोहले रहरैरहरमा माओवादीमा पुगेकी अनुपमा सिन्धुली क्याम्पबाट बाहिरिएपछि पार्टीमा सक्रिय छैनन् । उनको पदकको ग्राफ एकनासको छ । छैटौं राष्ट्रिय खेलकुदमा कांस्य, सातौंमा रजत र आठौंमा स्वर्ण । त्यही स्वर्ण र छनोटमा पाएको सफलताले उनलाई सागसम्म डोर्‍याएको हो । करातेको प्रिमियर प्रतियोगिता खेलिसकेकी उनलाई घरेलु च्याम्पियनसिपमा हात पारेको स्वर्णपदकको संख्या याद नै छैन । ‘धेरै जितेकी छु । तर कति खेल्यो र कति जित्यो भन्नेचाहिँ याद छैन,’ हाँस्दै भनिन् ।
मनिता र अनुपमामा एउटा समानता छ । दुवैले १७ वर्षको छंँदा खेल सुरु गरेका थिए । यसबीच मनिता नेपाली तेक्वान्दोको स्वर्णिम युगको खेलाडी बनिन् । केही वर्षअघिसम्म यी ५ फिट ७ इन्च अग्ली खेलाडीलाई घरेलु प्रतियोगितामा चुनौती दिने खेलाडी थिएनन् । उनी १७ औं एसियाडपछि आफैं खेलबाट टाढिएकी थिइन् । अमेरिका पुगिन् । विवाह गरिन् । छोरी जन्माइन् ।
यी सबै जिम्मेवारीलाई केही समयका लागि अलग्गै राखेर उनी फेरि किक र पन्च प्रहार गर्न फर्किएकी हुन् । इन्चोन एसियाडयता पहिलोपल्ट देशको प्रतिनिधित्व गर्न लागेकी मनिता भन्छिन्, ‘मैले धेरै खेलें । अब अरूले अवसर पाउनुपर्छ भन्ने लाग्यो । त्यसैले चार वर्ष तेक्वान्दोबाट अलग भए । फर्किन्छु भन्ने सोचेकी थिइनँ ।’ पतिको प्रेरणा र साथीहरूको हौसलतामा छोरी जन्माएपछि पनि प्रतिस्पर्धा गर्ने हिम्मत आएको उनले बताइन् । क्लोज क्याम्पमा बसेयता उनले कीर्तिपुरमा रहेकी छोरीलाई देख्न नपाएको एक महिनाभन्दा बढी भयो ।
छोरी जन्माएको एक वर्षपछि एरिनामा पुनरागमन गर्दै उनले गत चैतमा भएको आठौं राष्ट्रिय खेलकुदमा स्वर्ण जितिन् । तर, २० भदौमा भएको सागको छनोटमा असफल भइन् । अनि छोरीको हेरचाहमा लागिन् । छनोट भएका खेलाडीले १८ वर्षभन्दा कम उमेरको भएकीले खेल्न नपाउने भइन् । यसले मनितालाई अर्को मौका दिलायो । फेरि ३ कात्तिकमा भएको छनोटमा सफलता हात पार्दै उनले ५ वर्षपछि राष्ट्रिय टिममा पुनरागमन गरिन् । लगत्तै भर्जिनिया (अमेरिका) उडिन् । उतैबाट चीनमा भइरहेको नेपाली टिमको क्लोज क्याम्पमा पुगिन् । र अहिले स्वदेश फर्केर सागमा तेस्रोपल्ट प्रतिस्पर्धा गर्ने संघारमा आइपुगेकी छन् ।
छोरी हुर्काउनु सजिलो कि खेल्नु ? ‘बच्चा हुर्काउनु सबभन्दा गाह्रो रहेछ,’ दैनिक ६ घण्टा अभ्यास गरिरहेकी मनिताले हाँस्दै जवाफ दिइन् । आफ्नो पुनरागमनबारे भन्छिन्, ‘दीपक गुरु (विष्ट) ले यस्तै उमेरमा सफलता हात पार्नुभयो भने हामी (छोरी मान्छे) ले किन नसक्ने भन्ने लाग्यो ।’ छनोटबाट बाहिरिएर फेरि फर्कंदा तयारी गर्ने समय कम भएको उनको अनुभव छ । ‘पहिलाभन्दा स्पिड घटेको छ । तर, बिस्तारै राम्रो भइरहेको छ । फेरि एकपल्ट स्वर्ण जित्ने कोसिस गर्नेछु,’ उनले भनिन् । २० वर्षे करिअरको अनुभवलाई उपयोग गर्न सके उनलाई मिडलवेट (७३ केजीमुनि) स्वर्ण चुम्न गाह्रो नहुन सक्छ ।
१९ वर्षीया निमाले १२ औं सागको स्वर्ण जित्दाको बेला कोट्याइन्, ‘साह्रै चकचके थिएँ । अरूलाई एकदमै दुःख दिन्थे । ती दिनहरूलाई लिएर सम्झँदा हाँसो लाग्छ । अहिले परिपक्व भएकी छु । अरूलाई दुःख दिन्नँ ।’ उनलाई पहिलोपल्टै देशको प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर पाउँदा स्वर्ण जित्छु भन्ने लागेको थिएन । उनलाई भाग्यले पनि साथ दिएको थियो ।
उनी १३ औं सागमा त्यही सिलोङको सफलता दोहोर्‍याउने अभियानमा छिन् । यसका लागि उनले दैनिक ८ घण्टासम्म अभ्यास गरेकी छन् । ‘मेरो खेल पहिलाभन्दा राम्रो भएको छ । त्यसैले फेरि स्वर्ण जित्ने कोसिस गर्दै छु,’ लगनखेलस्थित नेपाली सेनाको कभर्डहलमा भेटिएकी उनले भनिन् । उनी भारतीय खेलाडीलाई नै आफ्नो मुख्य प्रतिद्वन्द्वी मान्छिन् । उनले थाउलको नान छ्वान/नान ताओ स्पर्धामा भारतीय खेलाडीलाई पछाडि पार्दै सिलोङमा सफलता हात पारेकी थिइन् । यसपालि पनि त्यही स्पर्धामा चुनौती पस्कँदै छिन् ।
निमा १४ वर्षको छँदै १७ औं एसियाडमा छनोट भएकी थिइन् । तर, अन्तिम समयमा उनको स्पर्धामा खेलाडी नपठाउने निर्णय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले गरिदियो । त्यसपछि झन्डै दुई साता स्कुल नै नगएकी उनी घरमै रुँदै बसेकी थिइन् । त्यसको दुई वर्षपछि सागमा पाएको स्वर्णले उनलाई अर्कै तहमा पुर्‍यायो । त्यो च्याम्पियनको स्तरमा रहिरहने चुनौती उनलाई यसपालि आएको छ । ६ वर्षअघि लुम्बिनी च्याम्पियनसिपमा तेस्रो भएयताका सबै घरेलु प्रतियोगितामा पहिलो स्थान हासिल गरेकी उनले १२ औं सागमा स्वर्ण जितेयता तीनपल्ट मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेलेकी छन् ।
प्रकाशित : मंसिर १४, २०७६ १०:५२